Muxuu ku salaysan yahay xidhiidhka Norway iyo Soomaaliya xilligan xasaasiga ah? | Radio Hormuud
War saxaafadeed ka soo baxay Norway ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, Ine Eriksen Soreide ay booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho ayadoo halkaas kulamo kula yeelatay madaxweynaha Soomaaliya , Ra'iisal Wasaarihiisa iyo diblumaasiyiin mug iyo miisaanba leh.
"Norway dan bay Soomaaliya ka leedahay, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale labadaba, Soomaaliduna dan bay leedahay, laakiin danta Norway ay leedahay ayaa ka wayn tan Soomaalida" ayuu yidhi Dr Abuukar Yuusuf Warsame oo wax ka dhigay Jaamacad ku taal dalka Sweden.
"Haddii Soomaalidu ku guulaysato kiiska badda, Norway waxay doonaysaa in ayadu ay hoggaamiso mashaariicda horumanineed" ayuu yidhi Dr Abuukar.
"Dadadaalladaas faraha badan, Norway waxay uga golleedahay in ay noqoto cidka ugu horraysa ee ka faa'idaysata khayraadka Soomaaliya haddii ay Soomaaliya ku guulaysato dacwadda muranka badda".
Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Khayrre ayaa ka mid ah madaxda haysata dhalashada dalka Norway, isla markaasna Saami ku leh sharikadda SomOil.
Mar BBC-du wax ka waydiisay in ay jiraan dano isdiidan oo ku aaddan in qaar ka mid ah masuuliyiinta Soomaaliya ee haysta dhalashada Norway ay u xaglin karaan dhanka Norway ayuu Dr Abuukar Yuusuf Warsame ku Jawaabay: "Tuhun ku saabsan danaha isdiiddan iyo qofku siduu isugu dheelli tiri lahaa danaha labada dhinac waa jiraa, balse hadda iima muuqato wax caddayn ah oo arrintaas la xidhiidha".